शुक्रबार, बैशाख ०९, २०७९ मा प्रकाशित
उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ आज बाँडफाँट भएको छ ।
निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङका अनुसार क्यापिटलको कार्यालय हात्तिसार काठमाडौंमा बाँडफाँट भएको हो । उक्त आईपीओकाे प्रि-अलटमेन्ट वैशाख ६ गते, मंगलबार सम्पन्न भएकाे थियाे ।
कम्पनीको आईपीयोमा २३ लाख ५१ हजार ४ सय ६२ जना आवेदकले आवेदन दिएका थिए। उक्त आवेदन मध्य २ हजार ४ सय ६ आवेदकको आवेदन रद्ध भएको थियो। कम्पनीको आईपीयोमा आवेदन दिने योग्य आवेदक मध्य २२ हजार १ सय १५ जनाले १० कित्ताका दरले शेयर हात पारेका छन् भने भाग्यमानी ६ जनाले ११ किताको दरले शेयर हात पारेका छन्।
कम्पनीले चैत्र २५ गतेदेखि चैत्र ३० गतेसम्म २ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ६६ हजार २५० कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले जारीपूँजी रू. ६ करोड ५६ लाख २५ हजार ३६ प्रतिशतले हुन आउने रू. २ करोड ३६ लाख २५ हजार बराबरको शेयर निष्काशन गरेको हो ।
उक्त संस्थाको शेयर निष्कासन तथा बिक्रि प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैङ्किङ लिमिटेड रहेको छ । आईपीओ बाँडफाँट भए लगतै मेरो शेयरको आईपीओको नतिजा हेर्न बनाएको साइत बाट हेर्न सकिने छ।